ကလေးတွေမှာ အလာဂျီ ဓာတ်မတည့်မှု ရှိမရှိ ဘယ်လို စမ်းရင်သိနိုင်မလဲ - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ကလေးတွေမှာ အလာဂျီ ဓာတ်မတည့်မှု ရှိမရှိ ဘယ်လို စမ်းရင်သိနိုင်မလဲ
နိုဝင်ဘာ 15, 2019 Wasu Kamchaisatian, M.D.
ကလေးတွမှာ အစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြင်းထန်တဲ့ အလာဂျီ ဓာတ်မတည့် တုန့်ပြန်မှု ဖြစ်ဖို့ ခြောက်လှန့်နေတဲ့ အကြောင်းရင်း ၂ ရပ် ရှိပါတယ်။ တစ်ခုကတော့ ရုတ်တရက်ချက်ချင်းကြီး ဖြစ်လာတတ်တာပါပဲ။ အင်ပျဉ်တွေ ထလာတာ၊ ရောင်ရမ်းလာတာ၊ အသက်ရှူကျပ်လာတာ စတာတွေတာ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း ရုတ်တရက်ကြီး ထ ဖြစ် လာတတ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ဒီတုန့်ပြန်မှု ဖြစ်လာတာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို အတိအကျ ထောက်ပြဖို့ ခက်ခဲတာပါပဲ။
အလာဂျီထတယ်၊ တစ်ခုခုအပေါ်မှာ လက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုတာ ကြိုတင် သတိပေးလက္ခဏာများမပြဘဲ ဖြစ်လာတတ်တာမျိုးဖြစ်ပြီး နှစ်အနည်းငယ်အကြာ အရွယ်ရောက်ချိန် တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပျောက်ချင်လဲ ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ အစားတစ်မျိုးမျိုးဟာ တစ်ပတ်လုံးစားနေတာတောင် ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် နောက်တစ်ခါစားရင် ဖြစ်ချင် ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ (အစားအစာ ထဲမှာ ပါဝင်ချက်ပြုတ်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ပြောင်းလိုက်တဲ့ အခါမျိုးမှာ အဲဒီပါဝင်ပစ္စည်းဟာ ကိုယ်နဲ့ မတည့်တဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုးမျိုး ဖြစ်နေတယ် ဆိုရင် အလာဂျီ ထဖို့ စေ့ဆော်မှုကို ဖြစ်စေတော့တာပါပဲ။) ဒီလိုကိစ္စမျိုးဟာ ထိုင်းက အစားအသောက် ပြင်ဆင်တဲ့ နေရာမှာ အတော့်ကို ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိနေပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဒီလိုဖြစ်တတ်တာကို ကနဦး ပြင်ဆင်တဲ့အချိန် စပ်ကြားမှာ ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဥပမာ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ ပီဇာစားနေရင်း အလာဂျီတွေ ထ လာတယ်။ ဘာကြောင့်မှန်းလဲမသိဘူး။ နောက်မှ သတိထားမိတာက ပီဇာထဲမှာ ပြည်ကြီးငါး ပါနေတာကိုး..။
အဲဒီတော့ ကလေးမှာ အလာဂျီတွေ ထွက်လာတယ်ဆိုရင် ပထမဆုံး လုပ်ရမှာက နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသဖို့ပါပဲ။
အမြန်ဆုံးနဲ့ အယုံကြည်ရဆုံး နည်းလမ်းပါပဲ။ ဆရာဝန်အများစု အသုံးပြုကြပါတယ်။ အရေပြားပေါ်မှာ အပ်နဲ့ပေါက်ပြီး မတည့်ဘူးထင်တဲ့ ဓာတ်ကို အစက်ချကြည့်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မတည့်ဘူးဆိုရင် ယားယံတဲ့ အင်ပျဉ်လိုဟာမျိုး ထွက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေအတွက် နည်းနည်း အခံရခက်ပေမယ့် သူနဲ့ မတည့်တာကို ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ အတွက် အသက်အန္တရာယ်အထိ ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ ဓာတ်မတည့်မှုမျိုးကနေ ရှောင်ရှားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရေပြားစစ်တာထက်တော့ အချိန်နည်းနည်း ပိုကြာပါတယ်။ ဓာတ်မတည့်မှုကို ဖြစ်စေတဲ့ စေ့ဆော်မှုကို ဖော်ထုတ်ပေး နိုင်ပေမယ့် ဘယ်လောက်အထိ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ပြင်းထန်မှုကိုတော့ အမြဲတမ်း တိုင်းတာ မပေးနိုင်ပါဘူး။ သွေးနမူနာကိုယူပြီး ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ ဓာတ်မတည့်မှု အမျိုးမျိုးနဲ့ စစ်ဆေးကြည့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဖြေထွက်ဖို့က ၂ရက် ၃ရက်လောက် ကြာချင်ကြာတတ်တယ်။
ဒီနည်းက ဓာတ်မတည့်တာကို တုန့်ပြန်မှု ပြင်းထန်တဲ့ သူမျိုးတွေအတွက် နည်းနည်းတော့ အန္တရာယ်များတယ်။ အရေပြားစစ်တာနဲ့ သွေးစစ်တာက ရလာတဲ့အဖြေအပေါ်မှာ အတည်ပြုဖို့ ဒါမှမဟုတ် လက်မခံဖို့ လိုတဲ့အခါမှာ ဒီနည်းကို သုံးလေ့ ရှိပါတယ်။ ကလေးအနေနဲ့ ကြီးလာတဲ့အခါ ဒီဓာတ်မတည့်မှုဟာ ရှိနေသေးလား ပျောက်သွားပြီလား ဆိုတာကိုလည်း ဒီနည်းနဲ့ စမ်းကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ထွေထွေထူးထူးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မတည့်ဘူးဆိုတဲ့ဟာ ကို နည်းနည်းလေး ကျွေးကြည့်တာပါပဲ။ အစားအစာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးတောင့်ပုံစံမျိုးနဲ့ ကျွေးကြည့်တာပါ။
ဒီနည်းကိုအိမ်မှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လုပ်မကြည့်ဖို့တော့ သတိပေးလိုက်ပါရဲ့။ ဆရာဝန်ဆီမသွားချင်လို့ အိမ်မှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် စမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ လုံးဝ အန္တရာယ်ကင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီလို စမ်းသပ်မှုမျိုးဟာ မတော်တဆ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ကယ်နိုင်အောင် လိုအပ်တာတွေ အားလုံး ပြင်ဆင်ထားပြီးမှ လုပ်ရတာမျိုးပါ။
မတည့်ဘူးထင်တာကို စမ်းစားကြည့်ပြီး ရွေးချယ်ဖယ်ထုတ်ထားခြင်း
ဒီနည်းက ကလေးငယ်တွေအတွက်တော့ သိပ်မကောင်းလှပါဘူး။ အထူးသဖြင့် မတည့်တဲ့ ဓာတ်တစ်ခုခု ရှိကြောင်း အရင်တုန်းက သိထားဖူးတွေအတွက်ပေါ့။ တခြား စစ်ဆေးတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ သိပ်အဆင်မပြေတဲ့အခါ ဆရာဝန်တွေဟာ တစ်ခါတစ်လေ ဒီနည်းကို သုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဓာတ်မတည့်မှုဟာ အသက်အန္တရာယ် ဖြစ်လောက်တဲ့အထိ မပြင်းထန်တဲ့အခါ နဲ့ အစားအသောက်အပေါ်မှာ ဓာတ်မတည့်မှု တုန့်ပြန်မှု တစ်ခုခု ရှိတဲ့အခါမျိုး အတွက် သုံးပါတယ်။ ဆေးရုံမှာစစ်ရတဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေအစား လုပ်တဲ့ စစ်ဆေးမှုမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဆရာဝန်က ဓာတ်မတည့်မှု ဖြစ်တတ်တဲ့ ဂျုံတို့၊ ပဲဘိစပ်တို့ မြေပဲ တို့ စတာတွေ ပါတဲ့ အစားအသောက်တွေကို မစားဘဲ ရှောင်ခိုင်းထားမယ်။ ဒီအတောအတွင်း ဓာတ်မတည့်တဲ့ တုန့်ပြန်မှု အလာဂျီထ မှု ရှိမရှိဆိုတာကို မှတ်တမ်းလေး လုပ်ပြီး ဆရာဝန်ကို ပြန်ပြရပါတယ်။ဒါတွေကတော့ ကလေးဓာတ်မတည့်မှုဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုများ နဲ့ သိကောင်းစရာများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေမှာ အလာဂျီ ဓာတ်မတည့်မှု ရှိမရှိ ဘယ်လို စမ်းရင်သိနိုင်မလဲ ကလေးတွမှာ အစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြင်းထန်တဲ့ အလာဂျီ ဓာတ်မတည့် တုန့်ပြန်မှု ဖြစ်ဖို့ ခြောက်လှန့်နေတဲ့ အကြောင်းရင်း ၂ ရပ် ရှိပါတယ်။ တစ်ခုကတော့ ရုတ်တရက်ချက်ချင်းကြီး ဖြစ်လာတတ်တာပါပဲ။
User rating: 4.40 out of5with5ratings
Wasu Kamchaisatian, M.D.
Diploma of Thai Board of Pediatrics, 1999.